PlayStation 4 Info. About. What's This?
ⓘ PlayStation 4
Ny PlayStation Portable na PSP dia azo entina lalao video hampionona fahafito taranaka Sony. Tsy navoaka tao Japana taminny 12 desambra 2004, any Amerika avaratra, ny 24 Martsa 2005 sy ao Eoropa taminny 1 septambra taminio taona io ihany. Ny herinandro voalohany ny fanafahana dia natao ny 1 tapitrisa ny varotra. Ny voalohany dikan-PSP dia fehezan-dalàna-ny atao hoe PSP-1000.
Ny PlayStation 4 na PS4 dia ny fahavalo taranaka lalao video console avy aminny Sony Solosaina fialam-Boly. Nanambara toy ny mpandimby ny PlayStation 3 nandritra ny fanolorana taminny 20 febroary ny taona 2013. Ny PlayStation 4 mifaninana aminny Wii U ny Nintendo, ary ny Xbox One ny Microsoft.
Ny PlayStation 4 manana AMD processeur mifototra manodidina ny x86-64 fampianarana napetraka. Ity dia natao mba hanao lalao fampandrosoana mora kokoa, ny fisarihana ny lehibe isan-karazany ny mpamorona. Ireo fiovana ireo dia milaza ny andrana Sony ho nihatsara ny alalan ny lesona nianarana nandritra ny mazava ho azy fa ny fampandrosoana ny famokarana sy ny fivarotana ny PS3. Malaza hafa rindrambaiko manasongadina ny PS4 ahitana ny 8 +GB ny tokan-tena fahatsiarovana GDDR5, haingana kokoa ny Blu-Ray fiara, ary nanolo-tena manokana natao faritra tafiditra ho aminny fanodinana ny feo, sary, sy ny dingana fototra.
Teo ny fampiharana vaovao sy ny tolotra, Sony dia mikasa ny PlayStation Rindrambaiko izay hanampy ny mpihazona ny PS4 mba hiova finoana ny finday avo lenta sy ny takelaka mba faharoa efijery mba hanatsara ny endriky ny lalao. Ny orinasa koa dia mikasa ny hamoaka ny Gaikai, ny fanompoana mifototra ao aminny "cloud" malagasy: Rahona fa dia tsy maintsy ara-nofo azo misintona sy ny lalao. Aminny fampidirana ny bokotra anjara ny maso sy ny fanaovana izany azo atao ny mahita ny lalao namana velona, Sony dia mikasa ny hifantoka bebe kokoa aminny lalao ara-tsosialy.
Araka ny mpanao mari-trano Marka Sernie, ny fampandrosoana ny faha-8 taranaka hampionona Sony, nanomboka tany am-boalohany, avy ny 2008. Latsaky ny 2 taona taty aoriana, ny PlayStation 3 no navoaka taorianny volana aoriana noho ny olana eo aminny famokarana. Ny fe-potoana napetraky Sony isan-taona ao ambadiky ny Xbox 360 - ny Microsoft, izay manakaiky ny 10 tapitrisa vondrona ao sales taminizany fotoana dia ny PS3. Ny filoha Tale jeneralinny ny PlayStation Eoropa, Jim Ryan, dia nilaza fa Sony nomanina mba hisorohana ny fahadisoana toy izany koa ny mpandimby ny PlayStation 3.
Taminny taona 2012, Sony, nanomboka nanolotra fitaovana fampandrosoana ny lalao mpandraharaha ahitana ny streamlined PC izay nanana ny AMD Haingana Sampana Fikarakarana chipset. Ireo fitaovana ireo dia fantatra aminny anarana hoe Orbis. Taminny fiandohanny taona 2013, Sony nanambara fa ny fanolorana fantatra toy ny PlayStation Fivoriana 2013 ho any New York taminny 20 febroary 2013 mba hanambara ny "ho avy ny PlayStation". Sony nanambara taminny fomba ofisialy ny PlayStation 4 ity. dia Nambara ny antsipirihany momba ny rindrambaiko ny PS4, ary niresaka momba ny sasany aminireo lafin-javatra izay tsy manana. Sony koa dia nampiseho lahatsary iray tena milalao ao aminny fampandrosoana, ary koa ny sasany ara-teknika ny fihetsiketsehana.
Sony nanambara fampahalalana bebe kokoa momba ny PS4 taminny 10 jona, 2013 aminny Elektronika fialam-Boly Expo, toy izany ihany koa dia naneho ny hampionona ny tenany.
Taminny septambra 2016, dia namoaka fa ny PS4 slim, vaovao ny dikan-tany am-boalohany hampionona, ary ny volana novambra taminio taona io ihany ny PS4 Pro ny upgraded dika aminny fanohanana 4K fanapahan-kevitra.
Ny famolavolana ny hampionona dia tsy nambara tao aminny valan-dresaka, ary koa ny endrika sy fepetra ireo dia tsy vonona. na izany Aza, ny sasany ara-teknika fepetra arahana momba ny hampionona nambara. Ny teknolojia ao PlayStation 4 dia somary mitovy aminny rindrambaiko ny solosaina manokana. Ity mahazatra nanampy ahy mba ho mora kokoa sy kokoa cheap mba hampitombo ny lalao ho anny PS4. Aminny konsoly ihany nambara tao amin ny tafa sy dinika Sony ao F3 2013.
2.1. Ara-nofo Console
Ny PlayStation 4 mampiasa ny ημιειδικής fanorenana Haingana sampana fikarakarana APU atao aminny AMD aminny fitarihana ny Sony. NY APU dia ny fanorenana tokan-tena ic izay ahitana ny Foibe Sampana Fikarakarana unité centrale sy ny Sary Fanodinana Tarika, ary koa ny faritra hafa toy ny fahatsiarovana maso sy lahatsary decoder. NY CPU dia ahitana ny valo x86-64 cores mifototra aminny ho avy trano, ary Jaguar AMD cpu. NY MAX ahitana ny 18 vondrona kajikajy mba hamorona ny teorika tamponisanny fampisehoana ny 1.84 TFLOPS. Ity computing fahefana azo ampiasaina ho anny sary, ny fizika simulations ny toerana, na izy rehetra mitambatra ny roa. Ny konsoly ihany koa dia ahitana ambaratonga faharoa manokana natao faritra tafiditra izay manao dingana miaraka aminny downloading, fametrahana, sy lalao ara-tsosialy. dingana Ireo dia azo atao seamlessly ny fototra nandritra ny gameplay, na raha ny rafitra eo aminny fomba matory. Na dia tsy fantatra be ny fahaiza-manao feo ny PS4, aminny konsoly ihany koa dia natokana ho toa zavatra, izay mety hanohana ny fifandraisana eo afovoanny ny lalao miaraka vitsivitsy loharanom-baovao any ivelany ary koa ny maro ny mivoaka MP3 noho ny in-lalao ny feo.
Ny PS4 efa 8 GB ny miray rafitra fahatsiarovana GDDR5 aminny ny tamponisanny ny passante ny 176 GB/s. Izao no 16 heny ny vola izay hita ao aminny PS3, ary antenaina mba hanome ny hampionona ny manan-danja mahatratra. Ny maritrano ανοποιημένης fahatsiarovana, mamela ny CPU sy ny MAX mba afaka mampiasa ny mahazatra fahatsiarovana, αφαιτώντας ny mila mitokana sy ny fanoloran-tena fitadidiana.
Ny tokan-tena-ny famakiana optical fiara dia manaiky discs Blu-Ray discs aminny hafainganam-pandeha ny 6X miaraka aminny fomba fijery ny manana ny ambony indrindra vakio ny hafainganam-pandeha ny 27 MB/s - manan-danja hanatsarana avy aminny 2x ny hafainganam-pandeha ny PS3, izay nanana ny fahaiza-manao afa-tsy 9MB/s. Mba bebe kokoa manatsara optical fiara, ny PS4 dia manana fitaovana decompression ny fotoana, Zlib, mamela lehibe kokoa anarana aminny zava-misy, raha mbola miaraka aminizay koa, ny hampionona dia tsy tapaka ny mamonjy ny angon-drakitra ho aminny fiara mafy, ary na dia ny preload angon-drakitra raha ny lalao dia tsy navitrika taminny fampiasana ny optical fiara, aminny alalanny fametrahana ny ampahany aminny tetika PlayGo Sony. dia Mitatitra fa ny optical fiara dia tsy hanana ny fahaizany mba hamaky ny efatra heny ny duplication ny disks 100 GB, ny teknolojia vaovao ny Blu-Ray discs natao mba hanohanana ny 4k fanapahan-kevitra. Na dia ny hampionona manohana ny sary sy ny lahatsary ao aminny 4K fanapahan-kevitra, ny rafitra dia tsy tokony ho afaka haneho ny lalao any an-dafinny 1080pixel. Ny hampionona dia ahitana ny 500GB kapila mafy ho anny fanampiny fitehirizana, izay mety ho upgraded ny mpampiasa.
Ny PlayStation 4 dia endri-javatra anny 802.11 b/g/n wireless tambajotra fifandraisana, Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX sy 1000BASE-T, Bluetooth 2.1, ary ny roa USB 3.0 seranan-tsambo. Ny vondrona fanampiny ao aminny seranan-tsambo ihany koa ny ho tafiditra noho ny fifandraisana aminny PlayStation Fakan-tsary, ny mihetsika tratra fakan-tsary nomerika fitaovana voalohany nampidirina eo aminny PS3. Ny mono headset, izay mety ho plugged an-DualShock 4, dia tonga nafatotra ho amboarany miaraka aminny rafitra. Audio/video output safidy ahitana HDMI sy optical S/PDIF.
Ny PlayStation 4 dia wireless fifandraisana aminny tambajotra anny 802.11 b/g/n, Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX sy 1000BASE-T, Bluetooth 2.1, seranan-tsambo roa USB 3.0. Ny vondrona fanampiny seranan-tsambo tafiditra ho anny fifandraisana aminny PlayStation Fakan-tsary, nomerika fakan-tsary ny hetsika tratra, izay voalohany aseho eo aminny PS3. Ny mono headset, izay mety ho plugged an-DualShock 4, dia tonga nafatotra ho amboarany miaraka aminny rafitra. Audio/video output safidy ahitana HDMI sy optical S/PDIF.
2.2. Ara-nofo Fanaraha-maso
Ny DualShock 4 dia ho ny kilonga-maso ny PlayStation 4, ary ho amidy aminny $59 ANTSIKA/$59 CA/€59/£54. Mitovy aminny DualShock 3, izany mampifandray aminny konsoly aminny alalanny Bluetooth 2.1+EDR. Ny DualShock 3, fa tsy ho mifanaraka aminny PS4. Ny DualShock 4 dia ho fitaovana aminny lafin-javatra vaovao maro, anisanizany ny naorina-in touch pad roa-hevitra karazana capacitive eo ambonin ny fanaraha-maso, izay ny mpampiasa afaka manindry.Ny maso manohana mihetsika ho tratra aminny alalanny gyroscope jery telo famaky sy ny fepetra patented telo-ampela, ary nihatsara ny vibration. Dia ahitana ny tsy removable, rechargeable lithium-ion bateria lasa afaka mitahiry 1000 mAh. Ny fitsapana modely milanja 210 h 7.4 oz, dia refinny 162 * 52 * 98 mm 6.4 * 2.0 * 3.9 ao, fingotra, na voasokitra ato plastika manampy ny hanatsara mafy. Ny drafitra natolotra ny fanambarana ny PlayStation 4 no "akaiky ny farany"
Ny maso ny endri-javatra maromaro output connectors. Ny Stereo headphone Jack3.5 mm mpamakinny trs connector ho fanohanana ny fifandraisana ao an-tsofina aminny micro, mba hamela ny mpampiasa mba miteny sy mihaino taminizany andro izany. Dia ahitana ihany koa micro USB-seranan-tsambo, ny fanitarana ny cable, ary mono mpandaha-teny. Ny maso dia mety ho voampanga aminny alalanny micro USB-seranan-tsambo, ny fanoloran-tena mamaly ny toby, na ny console na dia ny hampionona mikatona.
Ny DualShock 4 endri-javatra manaraka ireto bokotra: ny bokotra SAL, ary tsindrio Anjara, ary tsindrio Safidy, directional bokotra, action bokotra, bokotra indray R1/L1, mahatonga R2/L2, analog tapa-kazo aminny clickable L3/R3 ary ny mikasika pad aminny clickable. Ireo no be dia be ny fiovana raha oharina aminny DualShock 3 sy ny hafa be taona ny fanaraha-maso Playstation. Ny bokotra Start sy Mifidy no tafakambana aminny SAFIDY bokotra. Ny manokana ny bokotra Anjara dia mamela ny mpilalao download lahatsary avy aminny lalao milalao. Ny levers sy ny mahatonga anilay fanirian efa redesigned mifototra aminny hevitry ny mpamorona ny hampionona. Ny joysticks izao dia endri-javatra ny concave amboninny.
Ny DualShock 4 ihany koa ny lafin-javatra maivana trano fisotroana izay afaka mampiseho maro samy hafa loko. Ny loko hanampy fantaro ny mpilalao sy fampitandremana azy ireo amin-dehibe ny hafatra toy ny ambany ny fiainana. izany Koa interacts aminny fakan-tsary miraiki-po fa mahatsapa ny hetsika sy lalina aminny alalanny fampiasana ny maso ny fahazavana fisotroana. Mifototra aminny efa misy ny teknolojia ampiasaina ao aminny PlayStation Mifindra. Ny efa misy PlayStation Hifindra mpanara-maso dia ho tohananny PS4.
2.3. Ara-nofo PlayStation Fakan-Tsary
Ny PlayStation Maso dia redesigned sy ny anarana ny PlayStation Fakan-tsary. Izany dia ahitana ny roa fakan-tsary aminny fanapahan-kevitra ny 1280?800px. Ny mitovy aminilay family mbola, dia miasa aminny misokatra Modely:F/2.0, mifantoka lavitra 30 sm, ary ny 85° sehatry ny fahitana. ny fisehonny Ny roa fakan-tsary dia manome fahafahana ho anny fomba maro ny hetsika, arakaraka ny kendrena fampiharana. Ny roa fakan-tsary dia mety ho azo ampiasaina miaraka ny lalina-noho ny fahatsapany fa manana ny zavatra eo aminny sehatry ny fahitana, mitovy aminny Kinect ny Microsoft. - tsy izany, ny iray aminireo fakan-tsary dia afaka ny ho ampiasaina mba hanoratra ny lahatsary sary raha ny hafa dia ampiasaina ho anny fanaraha-maso ny fifamoivoizana.
Ny PlayStation Fakan-tsary dia manasongadina ihany koa ny mikrô isan-karazany efatra fantsona, izay manampy mba hampihenana ny tsy ilaina ambient feo, ary na dia afaka ny ho ampiasaina mba hamoaka didy. Ny habenny ianao manantena ny ho dia 186 x 27 x 27 mm 7.3 x 1.1 x 1.1 sakany x haavo x lalina lanja 183 h 6.5 oz.Dia firaketana an-tsoratra ny lahatsary tao MANTA sy ny YUV uncompressed ary dia mifandray aminny PlayStation 4 via ny vondrona fanampiny vavahady aminny hampionona. Ny PlayStation Fakan-tsary dia mivarotra toy ny misaraka, fitaovana fanampiny, aminny sanda $59 ANTSIKA/$59 CA/€49/£44.
2.4. Ara-nofo Manarona fitaovana
Ireo fitaovana isan-karazany toy ny finday avo lenta, takela-bato, ary PlayStation Vita afaka mifandray aminny PlayStation 4 toy ny faharoa efijery. mpiara-Mitory fitaovana afaka ihany koa ny fanairana ny antso ho aminny console avy aminny fomba matory.
Ny PlayStation Vita dia azo ampiasaina ho anny streaming video mivantana avy aminny konsoly, mamela ny fampiasana ny lalao izay manohana azy, lavitra.Sony manantena ny hanao ny lalao rehetra ny PS4 mifanaraka aminny PlayStation Vita. Mpandraharaha afaka manampy Vita-manokana ny fanaraha-maso ampiasaina aminny alalanny Lavitra Play.
Ny PlayStation App dia hamela ny fitaovana finday mba mifandray aminny PlayStation 4, toy ny Xbox SmartGlass. Dia ho ampy ho anny iOS sy ny Android finday avo lenta Sony Xperia voamarina Playstation ny efa προεγκατεστημενη sy ny takela-bato. mpilalao afaka mampiasa fampiharana ity ka, ohatra, buy anaram-boninahitra eo PS4 raha mbola lavitry ny trano, ary nataony lavitra alaina ny hampionona, jereo velona ny renirano ny mpilalao hafa, ary jereo ny sarintany ny lalao raha mbola milalao.
3. Ny rindrambaiko sy ny tolotra
Na dia ny PS4 dia tsy ilaina ny fifandraisana Aterineto ho azy hiasa, Sony milaza fa mety ho ny PlayStation 4 mety ho be kokoa rehefa izany dia mifandray. Ny PlayStation Network PSN manome mpilalao mahazo isan-karazany ny asa mifototra aminny Cloud computing, avy aminny PlayStation Store anisanizany ny famandrihana asa Mozika tsy manam-petra sy ny Lahatsary tsy misy Fetra. Mpanjifa afaka mijery ny anaram-boninahitra sy ny renirano ny lalao aminny alalanny Gaikai mba hanandrana azy saika eo no ho eo. ny Tambajotra multiplayer ny fahazoana mitaky famandrihana PlayStation Plus, fa maimaim-Poana-ho-milalao anaram-boninahitra toy ny transformers age ho lany 2 ary DC izao rehetra Izao an-Tserasera dia ho hita raha tsy misy ny famandrihana, ary asynchronous toy ny asa an-tserasera leaderboards dia tsy ho azo idirana. bebe Kokoa, noho ny ilaina ny fandraisam-peo ny aterineto multiplayer lalao, izay mandritra izany fotoana izany an-tserasera, Sony tsy hamela ny fampiasana ny mpitory nyaterineto-nitranga. Sony mikendry ny hanitatra sy εξελίζει ny asa manome mandritra ny fiainana ny PlayStation 4.
3.1. Ny rindrambaiko sy ny tolotra Ny Mpampiasa Interface Tsara
Ny PlayStation 4 no hisolo ny XrossMediaBar aminny iray vaovao. Ny mpampiasa mombamomba ho anny mpilalao, ho kokoa, maneho ny hetsika vao haingana, ny anarany feno sy ny vaovao hafa izay mitohy aminireo mamoha ny Amboara. NY PS4 tena screen endri-javatra manokana afa-po avy aminny namana. Ny tolotra avy aminny antoko fahatelo, toy ny Netflix ary Amazon indray mipi-maso Video, koa azo idirana avy aminny vaovao interface tsara.Dia azo atao ho anny mpilalao mba hanaovana zavatra hafa rehefa milalao lalao, toy ny hanokatra ny navigateur web.
4. Endri-javatra ara-tsosialy
"Ara-tsosialy" dia iray aminireo dimy lehibe ny fitsipika noresahina aminny Sony. Na dia ny hampionona dia manana fomba fiasa ara-tsosialy, ireo endri-javatra dia tsy voatery ary afaka ny ho vonoina. Ny mpilalao dia manana ny safidy mba hampiasa ny tena anarany aminny namana, miaraka aminny anaram-bositra taminny toe-javatra hafa izay tsy fitononana anarana dia zava-dehibe.
4.1. Endri-javatra ara-tsosialy Publication
Ny DualShock maso 4 ahitana bokotra iray ny fampahafantarana Mizara izay mamela ny mpampiasa mba hijery ny farany 15 minitra ny lalao sy mifidy ny sary na lahatsary izay tiany hifandraisana. Ny haino aman-jery dia nampakatra seamlessly avy ny hampionona ny hafa tsy misy ilàna azy PSN na aminny tranonkalan-tambajotra sosialy toy ny Facebook, Twitter sy YouTube.
4.2. Endri-javatra ara-tsosialy Fampitàna mivantana
Mpilalao afaka hamakivaky eo mivantana ny lalao video milalao ny namana, ny fahafahana mifandray aminny fakan-tsary na aminny micro, mba jereo na mba hanampiana-nitranga dia sarotra ny sakana, ary koa mba mamindra live video ny gameplay aminny alalanny asa toy ny Ustream, mamela ny namana mba jereo sy ny fanehoan-kevitra momba azy aminny hafa navigateur internet sy fitaovana.
Ny Tale jeneralinny Sony Solosaina fialam-Boly ny Amerika, Jack Τρέττον, dia nilaza fa lalao ny PlayStation 4 dia miainga aminny tahanny dolara AMERIKANA dolara niakatra ho any ny $ 60-ny izany hoe, ao Eoropa izany dia mitovy ny vidinny Ny lalao aminny PlayStation4 dia tsy manana ny hidin-trano-ao aminny faritra, sy ny mpilalao dia afaka mifanakalo,ny hofan-trano ary nivarotra ny lalao, toy ny mividy ny lalao dia midika fa tokony hisy azy ireo eto.
Sony fanantenana mba hanamorana ny famoronana lalao aminny lalao mpandraharaha tsy miankina. Ao aminny fanolorana Sony ao F3 2013, ny orinasa dia nanambara fa mety hamela ny mpamorona mba αυτοεκδίδουν ny anaram-boninahitra eo PlayStation Tambajotra ho anny Playstation 3, 4, ary Vita. Ny orinasa nanambara fanampiny 10 mpankafy anaram-boninahitra dia ho hita eo ny PlayStation 4 taminny faranny taona 2013.
5.1. Lalao Ara-boajanahary sy ny votoaty an-tserasera
Ny hampionona dia tsy manohana misy video afa-po toy ny inona no misy ao aminny sehatra hafa PlayStation. Ankoatra ny voajanahary afa-po, izay azo vidiana ao aminny toeram-pivarotana, lalao rehetra PlayStation 4 azo sintonina avy aminny internet, miampy fa isaky ny lalao dia mety ho voasedra maimaim-poana. Ny Sony dia tsy mandrara ny mpampiasa ny faharoa-tanana lalao vidiana aminny endrika ara-batana ary tsy misy fepetra ny hampionona ny efa matetika ny fifandraisana aminny aterineto dia manamafy ny maha-ara-dalàna ny lalao.
5.2. Lalao PlayGo
Rehefa anaram-boninahitra dia nifidy an-tserasera, fotsiny ny ampahany aminny lalao angon-drakitra tokony nafindra tany aminny konsoly, dieny mbola tsy misy e.x. ny ambaratonga voalohany, ny dian-tongotra sisa ho nampakatra nandritra ny lalao, amin izany fampihenana ny miandry ny fotoana. Raha toa ka ny mpampiasa aleonny-kevitra ny hilalao lalao mivantana avy aminny kapila, PS4 dia mametraka ny tahirin-kevitra ny kapila mafy nandritra ny lalao, fampihenana ny loading fotoana. Izany dia tanterahina aminny alalanny processeur rafitra fototra. Toy izany koa, ny rafitra vaovao dia ho alaina seamlessly any ambadika tsy misy fahatapahana. Ny PS4 manohana ihany koa ny teknolojia izay miezaka ny mahatsapa ny fironana, συμπεραλαβανόμενων fiarovana izay ny mpilalao dia mety express liana taty aoriana, ary dia tonga dia alaina kely isan-jato ireo lalao tao aoriana, na dia aminny fomba matory, mba hamonjy ny fotoana.
5.3. Lalao Asa Hampiato
Raha toa ka mila ny farany ny fotoam-milalao haingana, ny PS4 dia miditra ao amin ny toetry ny ambany fahefana fihinanana sy mamonjy ny farany isa-minitra ny mpampiasa, ka fa rehefa miverina ny ara-dalàna mode, ny mpilalao dia afaka resume avy izay nijanona.
5.4. Lalao Fanohanana ny taloha anaram-boninahitra
Ny PlayStation 4 dia tsy ahitana ny fahafahana hanohana ny lalao avy teo aloha nampahery ny PlayStation nandritra ny hetsika. Ny Sony ao kosa dia mikasa ny hijery ny fakantsika tahaka anivonny rahona ny taranaka teo aloha ny maha-maharitra ny vahaolana ny aminny zava-tsarotra ny fanohanana taloha anaram-boninahitra. Ny orinasa dia mbola αποκλήσει ny fakantsika tahaka ny hampionona ny teo aloha taranaka.
Sony dia mikasa ny hamoaka mivantana ny asa fanompoana mifototra aminny rahona aminny alalanny Gaikai, ny orinasa nahazo ny Sony ny volana jolay 2012. Ny fanompoana dia haka tahaka sy hanome taranaka teo aloha ny Playstation games, nirohotra azy ireo ny PlayStaion4 ary, angamba, Vita, aminny alalanny aterineto.
6. Ny fanekena
Ny hampionona dia efa tsara fanekena. Ny Eurogamer miantso ny graphics ny teknolojia ao aminny PS4 hoe "miavaka" ary ny fanatsarana avy ny zava-tsarotra natrehin ireo mpamorona ny PlayStation 3. Ted Vidiny, ny Filoha sy ny filoha tale jeneralinny Lalao Reraka, niteny hoe: "aminny Maha-mpiara-miasa efa ela ny Sony ny efa nankafy ampy mahagaga ny teknolojia hampionona ao anatinny taompolo vitsivitsy ary toa ny PS4 mbola hitohy hatrany ity fomba amam-panao. Mino aho fa ny ankamaroantsika eto aminizao tontolo izao ny famoronana lalao nampahery, toy izany no tadiavinao mihoatra horsepower, bebe kokoa ny fitadidiana, ny kokoa ny toerana fitahirizana, haingana kokoa ny loading fotoana. Sony dia hita porofo mazava isika fa isika dia manana ny fanampiana izany hampionona. Na izany aza satria isika ao aminny Setroka tia famoronana vaovao ny lalao, izay toa tsara tarehy indrindra no mikoriana aminny Gaikai izay hamela anao mba hiaina vaovao lalao ho anny nampahery, aminny alalanny fitaovana isan-karazany."
Taorianny fanolorana ny Sony ao F3 2013, IGN nanoratra fa ny PS4 sy ny lalao nijery ny "tsara", raha ny vidiny sy ny fomba Sony dia "marina". Miombon-kevitra aminny Sony izay "raha tsy miraharaha ny lalao, aho hividy PS4". ankoatry ny politika Sony ny tsy fisianny zo nomerika ny fitantanana, ny tsy-fepetra ny fifandraisana aminny aterineto, tsy misy famerana, tsy misy fanamarinana, ny playStation 4 koa unbound faritra sy ny fiara mafy dia αφαιρέσιμος sy upgradeable, izay IGN mino fa izany dia manome tombony ny PS4 ny Xbox One, izay mihidy aminny faritra ary tsy jerena ny kapila mafy.
Ny GameSpot ihany koa tatitra nilaza fa ny PlayStation 4 ny safidy "ny mpilalao ho anny taranaka manaraka", taminny fitanisàna ny vidiny, ny tsy fahampianny ΨΔΔ, ary zava-dehibe kokoa, Sony ny ezaka nataony mba "hanaiky ny mpanjifa" ary "hajao ny mpijery" toy ny tena endriky Ny mpanoratra ny GameSpot Tom McShea nanoratra fa aminny Hoe tsy misy faneriterena ho ampiasaina lalao sy ilaina aminny aterineto, izay ny Microsoft dia faly fa hampihatra ny Xbox One, ny Sony ambony ny PlayStation 4 toy ny hampionona ny tsena fialan-tsasatra ity.
7. Rohy ivelany
Official website Japana
Tranonkala ofisialy ny United States
Official website Amerika latina